လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားမြင်နေရအောင် အလန်းစားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ Mဆိုင်းလုရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားမြင်နေရအောင် အလန်းစားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ Mဆိုင်းလုရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး
မော် ဒယ်လ် Mဆိုင်းလု က တော့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အမိုက် စား ကောက် ကြောင်း အလှ တရား ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ ပြည်သူ ချစ် အနု ပညာရှင်တယောက် ပဲ့ ဖြစ်ပါ တယ် … . ပရိ သတ် တွေရဲ့ ရင် ထဲ မှာနေရာ တစ်ခု ကို ရယူ ထားနိုင် တဲ့ သူမက တော့ အမိုက် စား ပုံစံ လေး နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်း လွန်း တဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လူ မှုကွန် ယက် စာမျက် နှာ ထက် တင်ပေး လေ့ရှိ သူပါ..။ သူမကတော့ မိန်း ကလေးတွေ ရဲ့ အားပေးမှုရော ယော ကြာ်းေ လး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု ကိုပါ ရယူထားနိုင်ခဲ့ သူလေး ဖြစ် ပါ တယ် … .
သူမ က တော့ ယခုမှာ အမိုက် စား ပုံစံလေး နဲ့ဆွဲဆောင် မှု ရှိ လွန်း နေပြီး အသည်း ယားစရာ ပုံစံလေး နဲ့ ဆော့ကစား ထားတဲ့ Tiktok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ချပြလာခဲ့ ပါ တယ် … . အထာ ကျ ကျလန်း လွန်း နေပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ သူမ ရဲ့ Tiktok လေး ဟာ ကြည်မိ သူ တိုင်းကို အချစ်တွေ ပိုစေ ခဲ့ ပါ တယ် … . ချစ် ပရိသတ်တွေ အ တွက် မော်ဒယ်လ် Mဆိုင်းလု ရဲ့ အမိုက် စား Tik Tok ဗီဒီယို ဖိုင်လေးကို ပြန်လ ည် ဖော်ပြ ပေး လိုက် ရပါ တယ် … .
မော်ဒယ်လ် Mဆိုင်းလု က တော့ အနုပညာ လောက မွာ နာမည် တစ် လုံး နဲ့ ရပ်တည် ထား နိုင် ခဲ့ ပြီး အောင်မြင် လျက် ရှိ နေတဲ့ ထိပ်တန်း မော် ဒယ်လ်တွေ ထဲ မှာ တယောက် အပါ အဝင်ဖြစ် ပါ တယ်..။ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေး မှု ကို အခိုင် အမာရ ယူထား နိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ အနုပညာ အလုပ် တွေကို ဆက် လက် လုပ်ကိုင် အလျှက် နေခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမ က တော့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံး လေး တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူလေး ပဲဖြစ် ပါ တယ် နော် … .
source : M Seng Lu ‘ s tik tok acc
ေမာ္ ဒယ္လ္ Mဆိုင္းလု က ေတာ့ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အမိုက္ စား ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ တရား ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား တဲ့ ျပည္သူ ခ်စ္ အႏု ပညာရွင္တေယာက္ ပဲ့ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ပရိ သတ္ ေတြရဲ့ ရင္ ထဲ မွာေနရာ တစ္ခု ကို ရယူ ထားနိုင္ တဲ့ သူမက ေတာ့ အမိုက္ စား ပုံစံ ေလး နဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္း လြန္း တဲ့ ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို လူ မႈကြန္ ယက္ စာမ်က္ ႏွာ ထက္ တင္ေပး ေလ့ရွိ သူပါ..။ သူမကေတာ့ မိန္း ကေလးေတြ ရဲ့ အားေပးမႈေရာ ေယာ ၾကာ္းေ လး ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ အားေပးမႈ ကိုပါ ရယူထားနိုင္ခဲ့ သူေလး ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
သူမ က ေတာ့ ယခုမွာ အမိုက္ စား ပုံစံေလး နဲ႔ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိ လြန္း ေနၿပီး အသည္း ယားစရာ ပုံစံေလး နဲ႔ ေဆာ့ကစား ထားတဲ့ Tiktok ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို ခ်ျပလာခဲ့ ပါ တယ္ … . အထာ က် က်လန္း လြန္း ေနၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ သူမ ရဲ့ Tiktok ေလး ဟာ ၾကည္မိ သူ တိုင္းကို အခ်စ္ေတြ ပိုေစ ခဲ့ ပါ တယ္ … . ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြ အ တြက္ ေမာ္ဒယ္လ္ Mဆိုင္းလု ရဲ့ အမိုက္ စား Tik Tok ဗီဒီယို ဖိုင္ေလးကို ျပန္လ ည္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ ရပါ တယ္ … .
ေမာ္ဒယ္လ္ Mဆိုင္းလု က ေတာ့ အႏုပညာ ေလာက မြာ နာမည္ တစ္ လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ ထား နိုင္ ခဲ့ ၿပီး ေအာင္ျမင္ လ်က္ ရွိ ေနတဲ့ ထိပ္တန္း ေမာ္ ဒယ္လ္ေတြ ထဲ မွာ တေယာက္ အပါ အဝင္ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္အားေပး မႈ ကို အခိုင္ အမာရ ယူထား နိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ ေတြကို ဆက္ လက္ လုပ္ကိုင္ အလၽွက္ ေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ သူမ က ေတာ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အျပဳံး ေလး ေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသူေလး ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ကြည့် ရှု သူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဗြောင်းဆန် သွားစေ မယ့် မမဆောင်း ရဲ့ အသဲယား စရာ ဗီဒီယိုလေး
Next post ကြည့်ရှုသူတိုင်း မှင်သက်သွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်အလှတရားတွေ ကို စတိုင်အလန်းလေးနဲ့ လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး